Mihidy ny birao fizahan-tany any Bahamas any Paris noho ny fanarenana vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Mihidy ny birao fizahan-tany any Bahamas any Paris noho ny fanarenana vaovao
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Ny minisiteran'ny fizahantany, fampiasam-bola ary fiaramanidina Bahamas dia nanambara fa, amin'ny 4 Oktobra 2021, dia hanidy ny Biraon'ny fizahantany Bahamas (BTO) any Paris, France izy.
Malahelo ny minisiteran'ny fizahantany fa nandray fanapahan-kevitra hanidy ny birao fizahan-tany Bahamas any Paris.
Ny tanjona dia ny famerenana ny paikadim-barotra ho an'i Eropa kaontinanta ary ny fanovana ny fizotran'ny fizahantany amin'ity tsena ity.
Ny biraon'ny fizahantany any Bahamas any London dia ho ivon'ny ezaka marketing eto amin'ny firenena UK sy Eropa.
Ny fanidiana ny BTO Paris dia tonga tao anatin'ny fanarenana ny paikady marketing any amin'ny kaontinanta Eropa. Ny fampitoviana ny fanentanana ny fizahan-tany any Bahamas amin'ity tsena ity dia hahita ny birao fizahan-tany Bahamas Tourist Office lasa ivon'ny ezaky ny varotra eto UK sy Eropa. Ny biraon'ny fizahantany Bahamas any Paris no voalohany tamin'ireo birao fizahan-tany manerantany natsangana tany Eropa kontinanta. Raha jerena ny maha-zava-dehibe an'io birao io dia alahelo no nandraisan'ny Minisitera fanapahan-kevitra hanidy ny BTO Paris.
Niresaka momba ny fanakatonana tsy ho ela ny Ny Bahamas Biraon'ny fizahantany any Paris, hoy ny talen'ny fizahan-tany jeneraly Joy Jibrilu, "Rehefa manakatona ny fisian'ity toerana ity ity toerana ity any Paris izahay dia maniry ny hanararaotra izany, amin'ny anaran'ny praiminisitra lefitra The Honorable I. Chester Cooper, minisitry ny Fizahan-tany, fampiasam-bola & fiaramanidina, ary ny iray manontolo Ekipa fizahantany Bahamas, ho fisaorana ampahibemaso ny mpitantana ny faritra, Ramatoa Karin Mallet-Gautier, nandritra ny 34 taona niorenany tamim-pitokisana tamina fizarana fizahantany nataon'ny Bahamas tany Frantsa.
Tale jeneralin'ny fizahan-tany, Joy Jibrilu
"Rtoa. Mallet-Gautier, ”hoy ihany ny Tale jeneraly“ dia nanara-maso ihany koa ny fizahan-tany nataon'ny fizahan-tany Bahamas tany Belzika, Luxemburg, Monaco, Suisse miteny frantsay, Espana ary Portugal. Nandritra izay taona maro izay, Ramatoa Mallet Gautier no nitarika ny famonoana noho ny paikadin'ny varotra The Bahamas tany France, izay nahatonga ny fametrahana tambajotran'ireo mpiara-dia tsy mivadika izay nanampy ny tanjonay tamin'ny famolavolana ny tsena marin-toerana. an'ny mpandeha frantsay. Tianay ihany koa ny misaotra an-dRamatoa Clémence Engler, izay nanatevin-daharana ny BTO Paris roa taona lasa izay izay solontenan'ny varotra sy marketing. Ny serivisy azon'i Ramatoa Engler dia nitondra tombony be tamin'ny asantsika tany Frantsa. ”
Ny minisiteran'ny fizahantany, fampiasam-bola ary fiaramanidina Bahamas dia manolo-tena amin'ny fifandraisany maharitra amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy ao Frantsa. Ny loharanom-bola hanohanana ny fitomboan'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny asa fivezivezena any Bahamas dia hitantana avy amin'ny The Bahamas Tourist Office any London, eo ambany fiahian'ny talen'ny Minisiteran'ny Eropa, Andriamatoa Anthony Stuart.
Manantena ny hamoahana ny fandriana fandraisana ireo mpitsidika frantsay an'arivony maro isan-taona izay mitsangatsangana any amin'ireo nosintsika ny mponin'ny Nosy The Bahamas.